Shirka Soomaalida ee UK - BBC Somali
Shirka Soomaalida ee UK
15 Jannaayo 2012
Image caption Guddoomiyaha SDUK, Maxamed Ismaaciil Atoore, oo u warramaya Farxaan Maxamed Jimcaale
Waxaa magaaladatan London lagu qabtay shir ay ka qeybgaleen Soomaalida ku dhaqan UK, oo looga hadlayay shirka dhawaan ay marti gelin doonto dowladda Britain ee lagu wado in lagu qabto London.
Shirkan oo ka sokow dadka Soomaalida, lagu martiqaaday siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka Britain iyo golayaasha deegaanka London, ayaa waxa soo qabanqaabiyay ururka jaaliyada Soomaalida UK.
Guddoomiyaha, SDUK Somali Diaspora UK, Maxamed Ismaaciil Cilmi (Atoore) oo ka hadlay ujeedada shirka ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan in ay muujiyaan doorka Soomaalida ku dhaqan dalkan UK.
Image caption Rushanara Cali waxa laga soo doortaa Bethnal Green iyo Bow oo ah bariga magaaladatan london.
Siyaasiyiinta waddankan Britian ee shirkaasi ka qeybgalay waxaa ka mid ah Rushanara Cali oo ah xubixn ka tirsan baarlamaanka Britain oo laga soo doorto xaafadda Bethnal Green iyo Bow ee bariga magaaladatan london.
Waxa ay sheegtay in dadka shirka isugu yimid ay sheegeen inay muhiim tahay in dowlada Britain aanay u qaban shirkan inay ka walaacsan tahay ammaankeeda uun, ee laakiin uu intaa ka bato, haddii kale uu noqonayo mid lagu guuldareysto.
Rushanaa Cali waxa ay tiri "Waxaana u malaynayaa in taasi ay tahay fariin muhiim ah oo dowladdu ay tahay inay maqasho".
Maqal Qareeno Soomaalida Mareykanka kala hadlay kahortaga dembiyada dhalinyarada ay geystaan
Qareeno Soomaalida Mareykanka kala hadlay kahortaga dembiyada dhalinyarada ay geystaan
Maqal Gabar guulo ka gaartay horumarinta qoyskeeda
Gabar guulo ka gaartay horumarinta qoyskeeda
Maqal Shir ku saabsan ka hortagga gudniinka fircooniga oo lagu soo gabagabeeyay Puntland
Shir ku saabsan ka hortagga gudniinka fircooniga oo lagu soo gabagabeeyay Puntland
Maqal Jiritaanka Xamaas muxuu kusoo kordhiyay qadiyadda Falastiin?
Jiritaanka Xamaas muxuu kusoo kordhiyay qadiyadda Falastiin?
Maqal Xarun teknolojiyadda lagu baro dhalinayarad oo laga furay Minnesota
Xarun teknolojiyadda lagu baro dhalinayarad oo laga furay Minnesota
Maqal Maxay tahay xiisaha gaarka ee ay leeyihiin ciyaaraha ka socda Muqdisho?
Maxay tahay xiisaha gaarka ee ay leeyihiin ciyaaraha ka socda Muqdisho?